तपाईंको नराम्रा बानी र विचार यसरी हटाउन सकिन्छ - ज्ञानविज्ञान
तपाईंको नराम्रा बानी र विचार यसरी हटाउन सकिन्छ
व्यवहार, विचार, राम्रा र नराम्रा बानी सबैका हुन्छन् । ती विचार र व्यवहार हाम्रो आफ्नै तरिकाबाट हुने गर्दछ । कसैले बानी व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्छन् त कसैले सक्दैनन् । त्यसैले सकेसम्म हामीले आफ्नो नराम्रो बानी र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । बानी व्यवहार नकारात्मक बन्दै गए हामी सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ ।
आजको काम र आजको व्यवहारलाई नै महत्व दिएर हेर्नुपर्छ । सानालाई माया र ठूलालाई आदर गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । क्षमताभन्दा बढी काम गर्नु हुँदैन । क्षमताभन्दा बढी कार्यबोझबाट नै शरीरमा उच्च रक्तचाप, हृदयाघातजस्ता रोग लाग्ने हुन्छ । यसबाट नकारात्मक सोचहरू उत्पन्न हुन्छन् ।
हाम्रो दिमागमा सकारात्मक भावना जागृत गराउन सुत्ने र उठ्ने बानी एकदम व्यवस्थित हुनुपर्छ । बेलुका चाँडै सुतेर बिहान चाँडै उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ । हाम्रो शरीरलाई ५ देखि ७ घन्टाको गहिरो निद्रा आवश्यक हुन्छ । निद्रा राम्रोसँग नपरेमा मुटुमा रोगहरू बढ्दै जान्छन् र दिमागमा बोझ बढ्छ । त्यसले गर्दा रक्तचाप, ब्लडप्रेसर, सुगर बढ्छ । साथै, हृदयाघात हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।
बिहान उठेर नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ । जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा सकारात्मक कुराहरू आउँछन् । शरीर स्वच्छ र हल्का हुन्छ ।चुरोट, सुर्ती र रक्सी पिउने बानी त्याग्नुपर्छ । यस्ता बानीले हाम्रो शरीरमा नकारात्मक सोचको विकास हुन मद्दत गर्छ ।किताब पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ । नियमित रूपमा किताब पढ्ने बानी भएका व्यक्तिको जीवन बढी व्यवस्थित हुन्छ । आफ्नो कुनै नराम्रा कुराले अरूलाई असर गरेको छ भने त्यस्ता कुरा तत्काल छोड्नुपर्छ ।
Topics #बानी #हटाउन
Don't Miss it यस्ता छन् फलफूलको जुससँग प्याजलाई खाँदा हुने फाइदाहरू
Up Next बहिरोपनबाट कसरी बच्ने ? बच्चाको कान सुन्ने क्षमता कसरी जोगाउँने ?
मर्निङ वाकमा जाँदा ध्यान दिनुपर्ने यी १२ कुराहरु
शारीरिक रुपमा तन्दुरुस्त मानिसले पनि नियमित मर्निङ वाक गर्नु स्वस्थ र दीर्घ जीवनका लागि फाइदाजनक कुरा हो। रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोग, फ्याट्टी…
कसरी राख्ने खुर्सानीलै धेरै दिन सम्म ताजा ?
हरियो खुर्सानी चाँडै बिग्रिनुमा भेट्नोको खास दोष हुन्छ । बजारबाट ल्याएपछि सबै खुर्सानीका भेट्ना चुँडाएर फालिदिनुहोस् । अब, एउटा प्लास्टिक…
खुसी र सुखि सधैभरि कसरी हुने ? ? जान्नुहाेस्
ऊर्जाशील हुनुको एउटै उत्तम उपाय खुसी हुनु हो। खुसी मानिस निकै ऊर्जाशील हुन्छन् र जिन्दगीमा धेरै सफलतासमेत हात पार्छन्। नि:सन्देह…
क्यान्सरको सुरुवात ८ संकेतहरु, सुरुवातमै उपचार गर्न सकियो भने क्यान्सर पूर्ण रुपमा निको हुन्छ ।
यी संकेतहरुले क्यान्सरको सुरुवात हुन लागेको जनाउँछन् र सुरुवातमै उपचार गर्न सकियो भने क्यान्सर पूर्ण रुपमा निको हुन्छ । १.…
सफल जीवन चाहनुहुन्छ ? सफल जीवनका लागी जान्नै पर्ने कुराहरु (भिडियोसहित)
समय एउटा वेग वा गति हो जो निरन्तर आफ्नै हिसावले अगाडि बढिरहेको हुन्छ । न हामीले यसलाई रोक्न सक्दछौं न…